Wararka - Goynta shaagagga iyo giraangiraha wax shiidaya
J: Qalabka jarista maqaarka:
Mashiinka jarista waxaa loo qaybin karaa laba nooc: saxanka goynta caarada iyo saxanka goynta dheeman. Waxaa si weyn loogu isticmaali karaa jarista alaabada birta caadiga ah, birta birta ah & qalabka aan birta ahayn. Intaa waxaa dheer, sababo la xiriira arrimaha deegaanka ee ka shaqeynaya jarista iyo nadiifinta, sida awoodda nukliyeerka iyo dhirta tamarta kuleylka iyo shuruudaha kale ee hawlgalka, baahida loo qabo jarista qalabka in laga xoreeyo birta iyo baaruudda iyo walxaha kale ee kiimikada ah si ay si hufan ugu shaqeeyaan. Sidaa darteed, waxaa jira cajalado goyn khaas ah oo loogu talagalay warshadaha tamarta nukliyeerka, waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa dalabyo kala duwan oo lagu gooyo birta kaarboon, birta birta ah, birta isku-dhafan, birta birta ah iyo biraha kale:
J: Qaybaha jarista saxankas
Qalabka wax lagu gooyo wuxuu ka sameysan yahay xoqid, wakiilo isku xidha. Sifooyinka jarista saxannada waxaa badanaa lagu go'aamiyaa arrimo ay ka mid yihiin xoqid, cabbirka walxaha, wakiilka isku xidhka, adkaanta, qaabka iyo cabirka. Dhexdooda, xoqitaanka waxaa badanaa loo isticmaalaa sida alumina oxide ama dheeman, kaliya qaybta aaladda ayaa run ahaantii ku lug leh jarista iyo xoqidda!
C: Goynta & shiidi caddaymaha disc
Tilmaamaha guud ee saxanka goynta iyo saxanka wax lagu shiidayo wax badan kama duwana. Sababtoo ah qaababkooda kala duwan ee loo adeegsado, qalabka wax lagu shiidiyo waa mid qaro weyn, sidaa darteed way ku sii adkeysan kartaa duruufaha qalliinka shiidi kara, laakiin qalabka wax lagu gooyo waxaa loo isticmaalaa goynta muddada dheer mana loo adeegsan karo sida mashiinka wax lagu shiido, ilaa giraangirta wax lagu shiido loogu talagalay mooyee iyada oo la gooyo ama la shiido hawlo labadaba, haddii kale dabeecad kasta oo aan raacin naqshadda alaabta lafteeda waa khatar.
D.Noocyada jarista saxannada
Mashiinka goynta miisaanka waa fududahay in la jabiyo, laga yaabee inuu burburiyo qalabka shaqada ama xitaa shaqaalaha dhaawac u geysto, sidaas darteed mushququ wuxuu helaa dabool difaac marka uu goynayo.
Qalabka TAA alloy alloy loo gooyo waxaa lagu soo saaraa brazing. Xaaladaha qaarkood awgood, lakabka dheeman ayaa si adag loogu dhejiyay substrate-ka birta ka dib habka dhalaalida biraha. Noocan badeecada waxay leedahay astaamaha waxtarka shiidan ee sareeya, nolosha muddada dheer, amniga, ilaalinta deegaanka iyo wasakhda la'aan. Si taxaddar leh u beddel mashiinka goynta 'corundum cut disc disc', qalabka goynta elektaroonigga ah, iyo qaar ka mid ah maqaarka la jarjaray ee kulul. Waxay ku habboon tahay jarista tuubooyinka wareega, birta laba jibbaaran, biraha birta ah, birta xagalka, birta kanaalka, I-beams, iyo astaamaha kale ee biraha, oo ay ku jiraan "saxidda tuurista birta ee saxda ah", feeraha garaafka garaafka leh iyo birta doofaarka ee kala duwan.
Isbarbar dhig inta udhaxeysa cajaladaha cusbada leh saxannada dhejiska dheeman ah: